Slovenia dia lasa renivohitra fizahan-tany fizahan-tany vaovao any Eoropa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Slovenia » Slovenia dia lasa renivohitra fizahan-tany fizahan-tany vaovao any Eoropa
Travel Travel • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Slovenia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Slovenia dia lasa renivohitra fizahan-tany fizahan-tany vaovao any Eoropa.
Ny fanentanana vao haingana nataon'ny Slovenian Tourist Board dia nanome fiainana ny toerana misy azy amin'ny fifantohana amin'ny fizahan-tany fizahan-tany, hatsaran-tarehy voajanahary ary valan-javaboary.
Ny 27% amin'ireo namaly ny fanadihadiana dia nilaza fa matetika izy ireo no mamandrika fialantsasatra.
'Adventure and sport' no karazana fialan-tsasatra fahadimy malaza indrindra, ary misy akony manokana amin'ireo mpitsidika nentim-paharazana ao Slovenia: Czechs sy Holandey.
Mpizaha tany maro no maniry toerana malalaka sy maitso rehefa afaka volana maromaro ao an-trano.
Nahazo aingam-panahy tamin'ny fanentanana fizahan-tany iraisam-pirenena vao haingana izay nifantoka tamin'ny fizahan-tany fizahan-tany, i Slovenia dia antenaina fa hiakatra ny fizahantany miditra ho tonga 5.7 tapitrisa amin'ny 2024, fitomboana 22% amin'ny haavon'ny pre-pandemic.
Araka ny filazan'ny mpandinika ny indostrian'ny fitsangatsanganana, ny 'adventure and sport' no karazana fialantsasatra fahadimy malaza indrindra, ary misy akony manokana amin'ireo mpitsidika nentim-paharazana ao Slovenia: Tseky sy Holandey.
Slovenia dia fonenan'ny sasany amin'ireo faritra tsy mampino indrindra any Eoropa saingy nahavariana fa nandalo mpizaha tany maro. Na izany aza, ny Birao mpizahatany SlovenianNy fanentanana vao haingana nataon'i dia namerina ny toerana haleha tamin'ny fifantohana amin'ny fizahan-tany fizahan-tany, hatsaran-tarehy voajanahary ary valan-javaboary.
Tamin'ny fanadihadiana natao vao haingana momba ny indostria, 27% amin'ireo namaly no nilaza fa matetika izy ireo no mamandrika fialantsasatra. Ny fizahan-tany fizahan-tany ihany koa dia hita fa niely kokoa tamin'ny sasany SloveniaNy tsenan'ny loharano fototra toa an'i Repoblika Tseky sy Holandy, miaraka amin'ny 40% sy 32% amin'ny mpamaly tsirairay dia manamarika fa ity no karazana fialan-tsasatra fehezin'izy ireo.
Ny fotoan'ny fampielezan-kevitra momba ny dokam-barotra ao Slovenia dia mety tsara. Mpizaha tany maro no maniry toerana malalaka sy maitso rehefa afaka volana maromaro ao an-trano. Ny fangatahan'ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana dia hahita ny fizahan-tany iraisam-pirenena ho tafarina haingana kokoa Slovenia noho ny toerana hafa any Eoropa.